Geophone String, Geophone marindrano - XYB
Miaraka amin'ny haitao mandroso kokoa, vokatra avo lenta, vidiny mirary, miaraka amin'ireo mpanjifanay hihaona amin'ny ho avy mamirapiratra ..
Miaraka amin'ny tanjon'ny orinasa "miorina amin'ny mpampiasa, mamorona sanda ambony indrindra ho an'ireo mpampiasa".
Ny orinasa dia hanohy ny fomba fandraharahana "marina, mazava tsara, henjana".
240 Hz Geophone avo lenta matetika 0.75% L ...
240 Hz Geophone Avo Avo Indrindra 0.1% Lo ...
100Hz Avo avo sy ny mari-pamantarana mari-pamantarana Ge ...
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny R&D, famokarana sy fivarotana fitaovam-pitrandrahana solika, fitaovana fandavahana sy famokarana ary fitaovana fikarohana momba ny jeofyika. Nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9000, fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana, fanamarinana ny rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana ny asa.
Ny vokatra mitarika amin'ny geophone fitrandrahana seismika dia manana andiany enina, karazany mihoatra ny 60.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fitrandrahana solika, mineraly ary jeolojika, làlana, tetezana, fananganana tohodrano sy tionelina, fivezivezena mekanika mavesatra, fanaraha-maso horohoron-tany sns.
Karazana maherin'ny 60 no nahazo alalana tamin'ny fangatahana patanty nasionaly
Anisan'izany ny patanty 20 mahery ho an'ny famoronana, karazana zava-bita siantifika sy teknolojia avo lenta mihoatra ny 10, ary loka mihoatra ny 20 nasionaly, faritany ary monisipaly ary teknolojia. Nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9000, fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana, fanamarinana ny rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana ny asa.
Nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9000, fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana, fanamarinana ny rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana ny asa.
Ny tsenan'ny vokatra dia nandrakotra ny tanimbary sy ny sahan'afo lehibe, ary natondrana tany Eropa, Amerika, Afrika ary Azia atsimo atsinanana ary firenena sy faritra 50 mahery.
Ny fahombiazan'ny vokatra sy kalitao tsara dia azo raisina sy fiderana lehibe.